‘महानगरको क्षमताअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ हलचल ल्याउने काम गरिरहेका छौँ’
एनसेल बाह्रखरी गल्फ पोखरा ‘महानगरको क्षमताअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ हलचल ल्याउने काम गरिरहेका छौँ’
पोखरा पर्यटकीय राजधानी भन्ने गरिन्थ्यो । नेपालमा आएका पर्यटकहरु एकपटक पोखरा आएनन् भने नेपाल गएको भन्ने नै हुँदैनथ्यो । जब विश्वव्यापी महामारी आयो त्यसले सबैभन्दा ठूलो मर्का पर्यटन र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई पारेको छ ।
विद्यालय त डामाडोल नै भइहाल्यो । यी तीनवटा पक्षलाई सबैभन्दा ठूलो नोक्सान परेको छ । हामीले पहिलो तीनमहिनामा अनुसन्धान गरेका थियौँ । त्यो अनुसन्धान गर्दा पोखरा महानगरभित्र मात्रै करिब ७ अर्बको नोक्सान भएको देखिन्छ । अहिले त एक वर्ष नै हुन लागिसक्यो, यसको असरको आकार पनि बढेको छ । त्यसैले सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । पर्यटन क्षेत्रको दुर्दशा यो भन्दा बढी कहाँ होला र !
महानगरपालिकाले हाम्रो ठाउँबाट पर्यटन क्षेत्रका लागि के गर्ने भनेर सोचेकै छौं । हामीले पहिले नै भनेका थियौं, सुरक्षाका उपाय अपनाऔं । अहिले बाह्य पर्यटकभन्दा आन्तरिक पर्यटकलाई प्रबर्द्धन गर्न जरुरी छ । पोखरा सुरक्षित छ, यो महामारीबाट डराउनु पर्दैन, कोरोना भइहालेछ भने पनि पोखरामा उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन खोज्यौँ ।
पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरुले पोखरा महानगरपालिकाले सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन्छ भन्ने कुरा हामीले तीनमहिना अगाडि नै सुरु गरिसकेका थियौं । यद्यपी त्यो हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा ठूलो कुरा जीवन हुँदो रहेछ । जीवन नै गइहाल्छ कि भन्ने डरले पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौं ।
दोस्रो, हाम्रो महानगरपालिकाको सातौं नगरसभाले प्रष्ट भनेको छ अब आन्तरिक पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न सहकारी सम्मेलन गर्ने, वैज्ञानिक सम्मेलन गर्ने, राष्ट्रिय रुपमा कार्यक्रम गरेर पर्यटन व्यवसायीलाई राहत दिने खालका कार्यक्रम गर्ने भनेका छौँ ।
पोखरा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका छौँ । हामीले फागुन पहिलो साता मेयर साइकल कार्यक्रम गर्दैछौँ । हामीले पोखरा सडक महोत्सव पनि गर्‍यौँ । महानगरको क्षमता, हैसियतअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ हलचल ल्याउन हाम्रोतर्फबाट काम गरिरहेका छौं ।
पोखरा क्षेत्रका गन्तव्य अहिले प्रायः सबै खुलिसकेका छन् । १०–१५ दिन भयो, यस क्षेत्रका प्रायः सबै गन्तव्य खुलिसकेका छन् ।
हिमागृह, रत्न मन्दिर नखुलेको विषय जहाँसम्म छ, यो महानगरको क्षेत्राधिकारमा परेको छैन । महानगरपालिकाले त दुईवर्ष पहिलेदेखि नै हिमा गृह, रत्न मन्दिर एउटा गन्तव्य हुन सक्छन्, ती गन्तव्यलाई खुलाउनुपर्छ, यी गन्तव्य खुलाउँदा राम्रो सन्देश जान्छ भनेर संघीय, प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको हो ।
तर, बीचमा प्रदेशले हामीलाई दिनुपर्छ भनिसकेपछि प्रदेशले ल्याउँछ भने पनि यो हाम्रै ठाउँमा मान्छे आउने हो भनेर छिटो भन्दा छिटो खुला गरिदिए हुन्थ्यो भनिरहेका छौं ।
सडक महोत्सव, बाह्रखरी गल्फजस्ता गतिविधिले मान्छेहरुको आवतजावत बढ्छ । कम्तिमा पनि सुस्ताएको पर्यटन व्यवसाय अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ । सडक महोत्सव गरेर पनि व्यवसायीहरुले अनुभव लिनुभयो होला । तीनदिन सडक महोत्सव भयो, त्यो बेलामा खास समस्या त देखिएन । त्यो बेलामा कुनै समस्या देखिएन भनेर लापरबाही गर्न त हुँदैन । तर, सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै व्यवसाय गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरुले पनि सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै कसरी आन्तरिक पर्यटकलाई बोलाउने होला, सोच्नुपर्छ ? आन्तरिक पर्यटकको साथसाथमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि लविइङ गर्न जरुरी छ । यो संघीय सरकारले गर्नुपर्छ र हामीले पनि गर्नुपर्छ ।
बाह्रखरी गल्फ गर्ने विषयमा हामीलाई पनि आएर भन्नुभयो । हामीले किन, कसरी केही नभनी उत्साहपूर्वक नै गरौँ भन्यौं । यसले कम्तिमा पनि ‘लजिस्टिक’ खालको खेल भएको कारणले यत्तिका मान्छेहरु पनि जाँदा रहेछन् भने हामी जाँदा के हुन्छ त ?
भन्ने सन्देश जान्छ र कम्तिमा पनि पोखराको पर्यटन व्यवसायमा कोसेढुङ्गा सावित होला भन्ने लागेर नै यसको पक्षमा महानगर अगाडि बढिरहेको छ ।
अब पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नयाँ ढंगको गतिविधि सुरु गर्न आवश्यक छ । हिजोको जस्तो पर्यटक आउँलान, राखौैला भन्ने जमाना गए । यो विपत्ले त्यो जमानालाई हटाइदियो ।
अब नयाँ ढंगले कसरी मार्केटिङ गर्ने, नयाँ ढंगले कसरी सञ्चालन गर्ने, हाम्रा पर्यटन गन्तव्यलाई पनि ‘टिपिकल’ खालका कसरी बनाउने ? सोच्नुपर्छ । अब हिजोको जस्तो परम्पराबादी तरिकाले नभई नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । कोभिड १९ को असरबाट पर्यटनलाई उकास्ने प्रयासस्वरुप बाह्रखरी मिडियाले एनसेल–बाह्रखरी पहलअन्तर्गत पोखराका राजनीतिज्ञ, उद्योगी व्यवसायीसँग जारी राखेको कुराकानीमा मेयर जिसीको यस्तो धारणा आएको हो ।